अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावका लागि किन छुट्याएनन् बजेट ? - Media Dabali
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावका लागि किन छुट्याएनन् बजेट ?
सोमवार, जेठ १७ २०७८
काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरी कात्तिक २८ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।
बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अंक नभए पनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगतमा झैं ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर आय–व्ययको पूर्ण विवरणमा पनि चुनावी बजेटको कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आईतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च स्पष्ट रुपमा जानकारी दिइएन ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको जिकिर गर्दै मन्त्री पौडेलले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको र निष्पक्ष तवरले चुनाव हुुने बताएका छन् । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले आवश्यक रकमको कमी हुन नदिने बताएका छन् ।
महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला चुनावलाई अर्बाैं रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्दा जनतामा सरकारप्रति थप नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था नगरेको बताइएको छ ।
महामारी मत्थर भएपछि रकमान्तरण गरी निर्वाचनलाई बजेट व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चालू खर्च कटौती गर्दै निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताइएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘बजेट सुनाउनका लागि होइन । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ पौडेलले भने, ‘बजेटप्रति जवाफदेही छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा द्विविधा नराख्न आग्रह गरेका छन् । पौडेलले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने दाबी समेत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनैपर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्न बजेट नल्याइएको जिकिर गरेका छन् ।
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उनले समयमा खोप ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।